Mayelana NATHI - Hebei Huipin Machinery Co., Ltd.
Singabantu emikhulu okusanhlamvu nowoyela imishini ibhizinisi onguchwepheshe ucwaningo lwesayensi, design, ukukhiqizwa, yokuthengisa kanye ukufakwa engineering.
Imikhiqizo ye-HP neMechine
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-40 yentuthuko, inkampani manje inesisekelo sokuqala sokukhiqizwa kwemishini yamafutha, onjiniyela abangochwepheshe bezobuchwepheshe kanye nochwepheshe, kanye nobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza nemishini yokunemba. Yonke imishini yamafutha nezesekeli zikhiqizwa ngokuzimela.
Isethi ephelele yenkampani yethu yemishini yokukhiqiza uwoyela, okokuhlanza okokusebenza okungavuthiwe, ukwelashwa kwasekuqaleni, ukuvuza, ukucwenga, ukugcwalisa nokwenza umkhiqizo ngomkhiqizo (njengobunjiniyela be-phospholipid, ubunjiniyela bamaprotheni) kwenziwa yinkampani yethu kanye nezikhungo nezikhungo zocwaningo lwesayensi zasekhaya. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokukhiqiza uwoyela busebenza kuzo zonke izinhlobo zezitshalo zikawoyela ezinkulu, eziphakathi nendawo nezincane. Inkampani yethu izophinde isuselwe kuzidingo zamakhasimende kanye nentuthuko yesikhathi esizayo yokwakhiwa kwamakhasimende nokuhlelwa kwefektri, ukuguqulwa kwesitshalo esidala, ukuxazulula izinkinga ezibhekene namakhasimende ekukhiqizeni uwoyela.
Sizokwenzela amakhasimende izinhlelo nezingcaphuno ngokwezidingo zawo.
Futhi onjiniyela bethu bazobophezeleka ekuqondiseni ukufakwa nokuthunyelwa kwemishini, futhi babhekele ukuqeqeshwa kwabasebenza kumasifundisane baze basebenze kahle.
Inkampani yethu ithobela umqondo webhizinisi we "idumela lokuqala, isayensi nobuchwepheshe obuholayo", futhi kancane kancane yakha isiko lenkampani elihlose insizakalo. Namathela endaweni yokuqala ephezulu, izindinganiso eziphakeme, ukuhlinzeka amakhasimende ngensizakalo eyenzelwe wena esezingeni eliphakeme.
"Huipin" isisekelo: sizinikele ekuthuthukiseni imboni nokusanhlamvu kawoyela ngamandla ethu!
Umqondo "we-Huipin": idumela kuqala, ubuchwepheshe obuholayo!
"Huipin" service tenet: isevisi yamakhasimende ephelele futhi ephelele!
1. Iwaranti yezinyanga eziyi-12 ngaphandle kwezingxenye zokugqoka
2. Incwadi enemininingwane yomsebenzisi we-English izokhishwa ngomshini
3. Izingxenye eziphukile zenkinga yekhwalithi (ngaphandle kwezingxenye ezigqokile) zizothunyelwa mahhala
Ukuphendula okwesikhashana enkingeni yezobuchwepheshe yekhasimende
Ukuvuselelwa kwemikhiqizo engu-5 yokubhekiswa kwamakhasimende
1.Gcina amahora angama-24 online ukuphendula imibuzo yekhasimende kanye nomyalezo oku-inthanethi
2.According imfuneko yekhasimende, umhlahlandlela ikhasimende ukhethe imodeli engcono kakhulu efanelekayo
3.Offer imininingwane yemishini, izithombe kanye nentengo yefektri ehamba phambili
Siyakwamukela amakhasimende ukuvakashela futhi ukuxoxisana ibhizinisi!
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Yonke Imikhiqizo Umshini Wokucindezela Uwoyela, I-Oil Expeller, I-Olive Oil Press, Umshini Wokucindezela u-Cold Press, Umhlwanyeli Wembewu Yembewu, Umshini Wokucindezela Uwoyela Omncane,